အမျိုးအစား: ဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို
အဆိုပါ matrix ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ၏ parameters တွေကိုဘာတွေလဲကောင်းသောရိုက်ချက်များ A3 ပုံစံများအတွက်ဖြစ်သင့် ??? အမှု၏သီအိုရီသည်ဤသည်ကားအဘယျသို့အကွာအဝေးကနေဒီ A3 ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမည်နည်း အကယ်. 40-50 စင်တီမီတာ၏ထို့နောက်ပမာဏကို ...
တီဗီ set-top box ကိုဒီဂျစ်တယ်တီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် prompt, တီဗီ3input ကို HDMI 1-ARC / 2-လက်မှတ်မထိုး / 3-MHL မဆိုရှိနိုင်ပါသည် ??? မည်သူမဆိုရန်။ ထို့နောက်ကို manual ထဲမှာဆန္ဒရှိ input ကို select လုပ်ပါ, စည်းကမ်းအတိုင်း, ဝေးလံသောတခုတခုအပေါ်မှာရှင်းပြချက်လည်းမရှိ ...
ငါသည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာများအတွက် Monitor ကိုအဖြစ်တီဗီကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား? ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ယူကြောင်းရှိမရှိ? အစားကို PC မော်နီတာတစ်ခုတီဗီသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ချေ ပတ်သက်. မေးခွန်းအားလုံးနီးပါးအဖြေတစ်ဦးအပြုသဘောဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ ...
ကျောင်းမှာအင်တာဗျူးမေးခှနျးမြား? ဤတွင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုများအတွက်မေးခွန်းများကိုရှိပါတယ်: 60 sebe.Kak သင့်အလယ်၌ __________ ဖို့အထူးသဖြင့်သင်ဦးဆောင်သောအရာကိုစကားအနည်းငယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်မယ်လို့ templates အကြောင်းကိုပြောပြပါ ... ?
အဘယ်သူသည်နှင့်အရာယျာဉ် De Luxe ထုတ်လုပ်? ကက်ဘိနက်အတွင်းအပူချိန်နှင့်အတူအလွန်ဆိုးရွား duhovochnom သည့်သာမိုမီတာပေါ်တွင်အပူချိန်-မကောင်းတဲ့ကွဲပြားခြင်းကိုက်ညီတဲ့မထားဘူး။ များစွာသောဆူညံသံအခါလက်စွပ်မီးဖိုမီးလောင်ရာ။ အဘယ်သူမျှမအဆင့်ကိုစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သော reshtki ...
သငျသညျသစ်တစ်ခုတဦးတည်းအပေါ်မော်စကို၌ဟောင်းရုပ်မြင်သံကြားဖလှယ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိသနည်း ထိုအသင်ဤတစ်လူသိရှင်ကြားတန့်ကြောင်းကိုသေချာဘို့မသိရပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှာတော့သင့် TV 1000 ရူဘယ် (ကျော်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် ...
Toshiba TV အတွက် "universal" hama remote ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။
Toshiba TV အတွက် "universal" hama remote ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ။ ထိုကဲ့သို့သောအဝေးထိန်းခလုတ်ကိုမဝယ်ယူမီ (ညွှန်ကြားချက်များတွင် (မည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆို) ထောက်ပံ့ထားသောကိရိယာများကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်း) ကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။
/ sg50-50 bnd ဒစ်ဂျစ်တယ် timer နေရာမှာ camelion setting အပေါ်ညွှန်ကြားချက်များရှာဖွေနေ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ !!! http://mcgrp.ru/instrukciya-Camelion-BND-50-slash-SG3-taymeryi.html?page_to_view=1 http://libcloud.com.es/?page=camelion_bnd-50_sg50_instrukciya rabote1 အဘို့အဘိတ်။ အဆိုပါ socket (230 Volt) တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ် timer နေရာမှာထည့်ပါ။2။ အကောငျးဆုံးအလုပ်သေချာစေရန်, ဒစ်ဂျစ်တယ် timer နေရာမှာစွန့်ခွာ ...
လှေကားရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦးလှေကားဝယ်ယူအာရုံစိုက်သင့်သလဲ မည်သို့လှေကားကိုဝယ်ယူသည့်အခါ + http://mastremont.ru/publ/spravochnik/vybor_instrumentov/kak_vybrat_stremjanku_video/78-1-0-444 ဗီဒီယိုကအရေးအပါဆုံး parameter သည်လှေကားရွေးချယ်ဖို့က၎င်း၏အလုပ်လုပ်အမြင့်သည်။ ဒါဟာအမြင့်မှအလွန်ရိုးရှင်းစွာတွက်ချက် ...
အိမ်သုံးအတွက်ဘယ် acoustics တွေကအကောင်းဆုံးလဲ? ငါနားကြပ်အဘို့လည်းဖြစ်၏။ ။ ရုရှားရက်ပ်နှင့်သူတို့၏ Panasonic SC-VKX80EE-K အသံလှိုင်း မှနေ၍ မိုက်မဲသောအောက်တန်းကျသည့်ဥများနားထောင်သည့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုငါငြီးငွေ့သည်။
တီဗွီမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ။ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတာလဲ တီဗီ resolution ကိုအရသာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံနှင့်အလုပ်လုပ်သောတီဗွီများကိုကြည့်ပါ။ တီဗီ၌ထိုကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ
pliz ငါ့ကိုပြောပြပါနှင့် 100 Hz LCD ကိုတီဗီ 200 Hz ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသလဲ * အမှိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်နီတာတွင်, 60 ဟတ်ဇ။ မော်ဂန်? အဘယ်သူမျှမတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရောင်းချမဆိုစတိုးဆိုင်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားပါ ...
LCD TV သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ အဆုံးသတ် ဤသည်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းအဆုံးတွင်အားလုံးမဟုတ်ပါ (စမတ်မေးခွန်းများမေးပါ) မျိုးရိုးကအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်ပေမယ့်။ "ကောင်းသော" ၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ထား ...
ဖြစ်ပွါးခြင်းထံမှ TTL mode ကိုခြင်းဖြစ်သည် ?? အရည်အသွေးအဓာတ်ပုံများကိုရယူများအတွက်အခြေခံနည်းပညာပိုင်းမှန်ကန်သောထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်ကင်မရာများအကြီးအကျယ်အားလုံးနီးပါးသူတို့ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျသိဓာတ်ပုံဆရာနှင့်အတူဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖယ်ရှား ...
အဘယ်သူ၏အခိုငျအမာ Qumo? အဆိုပါကုမ္ပဏီအရှေ့ဥရောပအတွက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်ငါးခုကိုအဓိကတောင်ကိုရီးယား Flash-မှတ်ဉာဏ်၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့် MP2002-ကစားသမားတစ်ဦးပူးတွဲစီမံကိန်းကိုအဖြစ် QUMO3နှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ...
ဘယ်နိုင်ငံကနေလာတာပါလဲ။ BEKO - တူရကီ Daewoo - ကိုးရီးယား Gorenje - ဟစ်တာချီ - ဂျပန် LG - ကိုးရီးယား Panasonic - ဂျပန် Samsung - Korea Scarlett - အင်္ဂလန် (တရုတ်) Thomas - GermanyZanussi - ...
ရွေးချယ်ဖို့ဒီဗွီဘီ-T2 နှင့်အတူဘယ်လက်ခံပိုကောင်း? : D-color DC1501HDSven လွယ်ကူကြည့်ပါ-121SUPRA SDT-94MDI DBR-501Tesler DSR-10TELEFUNKEN TF-DVBT205Sven လွယ်ကူ DDOriel 122 (ဒီဗွီဘီ-T963) Mezzo M2T7802Mystery MMP-2DT71Sravnenie ကုန်ပစ္စည်းများ-2 ကြည့်ပါ https://market.yandex.ru/compare.xml ? = 91105amp ဝှက်ထားကြ၏ cAT_ID = 2401072amp; CMD = -CMP = 12805239,11554060,11616201,11861195,10373836,10886746,11554062,11008558,11043215,10407793Kliknuv သင်တို့ရှိသမျှသည်ရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်တွေ့မြင်နိုင်သည် ...
စီးဆင်းနေသောရေနှင့်အတူ soleplate ချွတ်လျှင်, ပုံမှန်ရှိမရှိ? ဝယ်ယူရှိရာစတိုးဆိုင်, ရောင်းသူကိုဆက်သွယ်ပါ။ အဆိုပါမေးခွန်းကိုဖြေဖို့မလုံလောကျသတငျးအခကျြ။ အနည်းဆုံးကကောင်းတဲ့ပါလိမ့်မယ် ...
လူများ, စမတ်ဖုန်းရွေးချယ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ Sony က, Samsung Asus က, ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုခုပိုကောင်းဘယ်ဟာပါလဲ? ကောင်းပြီ, တစ်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်, ထို့နောက်သင်၏လက်ကိုမုသာ၌ကယူပါ။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌သူတို့မထိ။ Sony ကမမြင်မိပါဘူး ...
အခါပထမဦးဆုံးကင်မရာ? ဘယ်သူတီထွင်? ငါ Dennis ဟာညာဘက်မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ အမေရိကရှိတောင်မှ 19 ရာစုငါတို့သည်ဓာတ်ပုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ပုံအယ်လ် JM ၏တီထွင်သူ၏တည်ထောင်သူ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,407 စက္ကန့်ကျော် Generate ။